PP ကော်ဇောကြွေပြားစက်ရုံ - တရုတ် PP ကော်ဇောကြွေပြားထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
PVC back-Sentry 1.0 SQ နှင့် PP ဂရပ်ဖစ်
SENTRY 1.0 သည်ဂရပ်ဖစ် PVC ကြွေပြားများ၏အခြေခံစီးရီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စတော့ရှယ်ယာရွေးချယ်မှုသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၌နှစ်ပေါင်းများစွာလူကြိုက်များခဲ့သောအခြေခံစီးရီးမှလည်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုအလွန်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သိပ်သည်းသောမျက်နှာပြင်နှင့်အက်ကွဲခြင်းမရှိဘဲပျော့ပျောင်းသောကျောထောက်နောက်ခံသည်ဤထုတ်ကုန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ချက်ကုန်ပစ္စည်းကော်ဇောကြွေပြားပုံစံအတိုင်း: SENTRY 1.0 Component: 100% PP BCF ဆောက်လုပ်ရေး: ဂရပ်ဖစ်ပတ်လည်ပုံစံ Gauge: 1/12 Pile အမြင့်: 4.5 ± 0.5 mm Pile Weight :: 720 ± 20 g/m2 Primary Backing: ...
PVC Back-Rainbow plus နှင့် PP Graphic Plank
၁။ Rainbow Plus collection သည် plank အရွယ်အစားနှင့်ကျပန်းအရောင်များ၏အကူအညီဖြင့်ဖက်ရှင်ကျသောဒီဇိုင်းနာများနှင့်စားသုံးသူများအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ RP01 သည်ဇာတ်လမ်းတွဲ၏အခြေခံအုပ်စုဖြစ်ရန်ကျပန်းမီးခိုးရောင် ၄ ပိုင်း၊ RP02-RPR08 သည်ကျပန်းပေါ်လွင်သောအရောင် ၄ ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကိုအခမဲ့ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်သင်၏အခန်းကိုအကန့်အသတ်မရှိနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်အောင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ၂။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန်စတော့ရှယ်ယာပမာဏမှာအရောင်တစ်ခုလျှင် ၁၀၀၀ မီတာ Specification Product ကော်ဇောကြွေပြားကပ် ...
PVC back-Adventure SQ နှင့် PP ဂရပ်ဖစ်
Adventure Series သည်ဂရပ်ဖစ် PVC ကြွေပြားများ၏အခြေခံစီးရီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စတော့ရှယ်ယာရွေးချယ်မှုသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၌နှစ်ပေါင်းများစွာလူကြိုက်များခဲ့သောအခြေခံစီးရီးမှလည်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုအလွန်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သိပ်သည်းသောမျက်နှာပြင်နှင့်အက်ကွဲခြင်းမရှိဘဲပျော့ပျောင်းသောကျောထောက်နောက်ခံသည်ဤထုတ်ကုန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။
PVC back-Classic One နှင့် PP ဂရပ်ဖစ်
1. Classic One series သည် super classic ဒီဇိုင်းနှင့် classic အရောင်များပါလာသည်။
၂။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန်စတော့အိတ်သည်အရောင်တစ်ခုလျှင် ၁၅၀၀ စတုရန်းမီတာရှိသည်။ အရေအတွက်မလုံလောက်ပါကပို့ဆောင်ချိန်သည်ရက် ၂၀ ဖြစ်သည်။
PVC back-Starlet SQ နှင့် PP ဂရပ်ဖစ်
1. The Starlet Series သည် PVC ကျောထောက်နောက်ခံဖြင့်ကော်ဇောကြွေပြားများ၏ဂရပ်ဖစ်စီးရီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ တြိဂံ၏ရဲရင့်သောလျှောက်လွှာဖြင့်ကော်ဇောကြွပ်များ၏ရိုးရာ linear effect ကိုချိုးဖျက်သည်။ ၀ ယ်သူသည်သူ၏ဘတ်ဂျက်အတွင်းထူးခြားသောအခင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရနိုင်သည်။ အရည်အသွေးလည်းမြင့်မားသောမျက်နှာပြင်၌ရှိပြီးအက်ကွဲခြင်းမရှိဘဲနူးညံ့သောကျောထောက်နောက်ခံရှိသည်။
၂။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန်စတော့ရှယ်ယာသည်အရောင်တစ်ခုလျှင် ၁၀၀၀ စတုရန်းမီတာရှိသည်။ အရေအတွက်မလုံလောက်ပါကပို့ဆောင်ချိန်သည်ရက် ၂၀ ဖြစ်သည်။
PVC back-Traza SQ နှင့် PP ဂရပ်ဖစ်
1. The Traza Series သည် PVC ကျောထောက်နောက်ခံဖြင့်ကော်ဇောကြွေပြားများ၏ဂရပ်ဖစ်စီးရီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရိုးရာဒီဇိုင်းနှင့်အရောင်များကိုထည့်ထားသောတောက်ပသောလိုင်းများကြောင့်၎င်းသည်အစဉ်အလာနှင့်ဖက်ရှင်ကိုစနစ်တကျပေါင်းစပ်ထားသည်။ အရည်အသွေးလည်းမြင့်မားသောမျက်နှာပြင်၌ရှိပြီးအက်ကွဲခြင်းမရှိဘဲနူးညံ့သောကျောထောက်နောက်ခံရှိသည်။
PVC back-Vitality SQ နှင့် PP ဂရပ်ဖစ်
၁။ The Vitality Series သည် PVC ကျောထောက်နောက်ခံဖြင့်ကော်ဇောကြွေပြားများ၏ဂရပ်ဖစ်စီးရီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်းသည်သဘာဝအလှအချို့ကိုလက်ခံသည်၊ ထို့ကြောင့်မျဉ်းများသည်သစ်တောများ၊ ကျောက်များသို့မဟုတ်ရက်ကန်းများနှင့်တူသည်။ ထပ်ခါထပ်ခါလေးအပိုင်းပိုင်းသည်နောက်ဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုမိုသဘာဝကျစေပြီးပိုမိုဖန်တီးမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ၎င်း၏အရည်အသွေးသည်မြင့်မားသောမျက်နှာပြင်၌ရှိပြီးအက်ကွဲခြင်းမရှိဘဲနူးညံ့သောကျောထောက်နောက်ခံရှိသည်။
PVC back-Inspiration SQ နှင့် PP ဂရပ်ဖစ်
1. Inspiration Series သည်ဂရပ်ဖစ် PVC ကြွေပြားများ၏အခြေခံစီးရီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စတော့ရှယ်ယာရွေးချယ်မှုသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၌နှစ်ပေါင်းများစွာလူကြိုက်များခဲ့သောအခြေခံစီးရီးမှလည်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုအလွန်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သိပ်သည်းသောမျက်နှာပြင်နှင့်အက်ကွဲခြင်းမရှိဘဲပျော့ပျောင်းသောကျောထောက်နောက်ခံသည်ဤထုတ်ကုန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။
bitumen back-Murah SQ ပါသော PP Level Loop
၁။ Murah Series သည် entry level series များပေါ် အခြေခံ၍ အဆင့်မြှင့်ထားသော series တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုမိုဖက်ရှင်ကျသောဒီဇိုင်းဖြင့်၎င်းသည်တပ်ဆင်မှုနည်းလမ်းတွင်တောင်းဆိုမှုလျော့နည်းသည်။ ကျပန်းနည်းဖြင့်တပ်ဆင်ခြင်းသည်လွတ်လွတ်လပ်လပ်သဟဇာတဖြစ်စေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြလိမ့်မည်။ အရည်အသွေးလည်းမြင့်မားသောမျက်နှာပြင်၌ရှိပြီးအက်ကွဲခြင်းမရှိဘဲနူးညံ့သောကျောထောက်နောက်ခံရှိသည်။
၂။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန်စတော့အိတ်သည် ၁၅၀၀ စတုရန်းမီတာရှိသည်။
Bitumen back-Rainbow SQ နှင့်အတူ PP Level Loop
၁။ Rainbow Series သည် entry level series များပေါ် အခြေခံ၍ အဆင့်မြှင့်ထားသော series တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုခေတ်စားသောဒီဇိုင်းနှင့်အတူ pc တစ်ခုစီသည် gradation effect တစ်ခုပါ ၀ င်သောကြောင့်ဖောက်သည်များအားစနစ်တကျဖျက်စီးနိုင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုသို့ရောက်ရန်ကိုယ်ပိုင်နှစ်သက်မှုအမိန့်ဖြင့်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးအက်ကွဲခြင်းမရှိဘဲနူးညံ့သောကျောထောက်နောက်ခံနှင့်အရည်အသွေးသည်အဆင့်မြင့်နေဆဲဖြစ်သည်။
bitumen back-Element SQ ပါသော PP Level Loop
၁။ The Element Series သည် JFLOOR စတော့ပစ္စည်းများအတွက် ၀ င်ပေါက်အဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြေခံအရောင်လေးမျိုးရှိပြီးအားလုံးသည် bitumen ကျောထောက်နောက်ခံဖြင့် PP ကြွေပြားများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အ ၀ င်အဆင့်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၎င်း၏အရည်အသွေးသည်မြင့်မားသောမျက်နှာပြင်တွင်ရှိပြီးအက်ကွဲခြင်းမရှိဘဲနူးညံ့သောကျောထောက်နောက်ခံရှိသည်။ သင်ကလေးပုံတစ်ပုံလှည့်လျှင်၎င်းသည်အရောင် ၈ ရောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြလိမ့်မည်။